Tourism Places | पर्यटकीय क्षेत्र
Monday, 22 October 2018 01:49 pm, Nepal
पर्यटकिय स्थलको बारेमा छलफल गर्न जिम्मेवारी व्यक्ति नै आएनन्
मेचीकाली : 2011-08-11 18:48:27
साँगा, २६ साउन : पर्यटन वर्ष २०११ मा नयाँ गन्तव्यस्थल कैलाशनाथ महादेव तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको पर्यटनबाट आर्थिक क्रान्तिका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटन व्यवसायीहरुको चुनौती र अवसरका बारेमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएपनि सम्बन्धित निकायका कोहि पदाधिकारीहरु उपस्थित भएनन् । काभ्रे र भक्तपुर जिल्लाको सिमानामा रहेको कैलाशनाथ महादेवको मन्दिरमा बिहिबार पर्यटन वर्षमा साँगामा रहेको कैलाशनाथ महादेव मन्दिरलाई कसरी गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिए पनि छलफल कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायका कुनेपनि पदाधिकारी सामेल भएनन् ।
चरा हेर्न कोशीटप्पु जाऔं
मेचीकाली : 2010-11-30 18:09:01
वारिपारि अग्लो खर, पट्टेर, ढड्डीले ढाकेका घाँसेमैदान। बीचमा सप्तकोशी। दुई बर्षअघि वस्तीतिर पसेर विध्वंश मच्चाएको कोशी यहाँ भने शान्त छ र त्यस्तै शान्त छन्, कोशी बगरका अर्ना। यसैले २०३२ सालमा यसलाई कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र घोषणा गरियो। सिसौ, खयर र सिमलका रूख र पोथ्रा-पोथ्रीहरूले भरिएको यो टप्पु सिमसार भूमि र दलदले क्षेत्रका लागि विश्वमै प्रसिद्ध छ। यसबाहेक, कोशीटप्पु चराको वासका रूपमा पनि प्रख्यात छ। यहाँ ४२० प्रजातिका स्थायी चरा छन्, हरेक वर्ष साइबेरियाबाट हिमाल नाघेर अस्थायी चरा पनि केही महिनाका लागि डेरा खोज्दै आइपुग्छन्। अर्ना त नेपालमा केवल यहीँ मात्र पाइन्छ। यसैले कोशीटप्पुलाई अर्नाको राजधानी, चराको स्वर्ग भनिन्छ।
छोटो अवधिको पदयात्राका लागि रेसुङ्गा
मेचीकाली : 2010-11-17 09:37:20
गाई पाल्ने गोपाल र साधु-सन्तहरूको बास छ यो शिखरमा। प्राचीन युगमा ऋषिहरूले तपस्या गरेको मानिन्छ, जसका कारण यसको नाम रेसुङ्गा रहन गयो। समुन्द्र सतहदेखि १७०० मिटर उँचाइमा ३४ सय हेक्टरमा फैलिएको रेसुङ्गा क्षेत्र गुल्मी जिल्लाका एघार गाविसमा पर्छ। रेसुङ्गा क्षेत्रलाई पर्वतीय घुमफिरका लागि उपयुक्त गन्तव्य मान्न सकिन्छ। रेसुङ्गाबाट उत्तरतिर हेर्दा एकैदिनमा पुगिएला जत्तिकै नजिकमा अन्नपूर्ण प्रथम, दोस्रो र तेस्रोका साथै धवलागिरि, माछापुच्छ्रेलगायत १५ भन्दा बढी हिमाल देखिन्छन्। सूर्यास्तको बेला धवलागिरिको छायाँ त रेसुङ्गामै पर्दछ। चिसो हावापानी, घना वन र जैविक विविधताले त्यत्तिकै आकर्षित गर्छ।
देवीस्थान टावरबाट नियाल्दा..... (फोटो फिचर)
मेचीकाली : 2010-11-15 13:52:18
पर्यटनका लागि चर्चित छ काभ्रे । काभ्रेको धुलिखेलदेखि नमोवुद्ध र पलाञ्चोकसम्म विदेशी पर्यटकको ओइरो लाग्ने गर्छ । अझ नेपाल पर्यटन बर्ष २०११ सुरु हुनै लाग्दा यहाँ पर्यटक भित्रने क्रम बढिरहेको छ । पर्यटकहरुले धुलिखेल, नमोवुद्ध र पलाञ्चोकतिरमात्रै घुमिरहँदा धुलिखेलनजिकैको एउटा पर्यटकीय स्थल भने ओझेलमा छ । पर्यटकीय क्षेत्र भएरै पनि ओझेलमा परेपछि पनौती–१० शारदादेवीस्थानमा पर्यटकका लागि भ्यूटावर निर्माण भएको छ । कस्तो देखिन्छ त उक्त टावरबाट काभ्रेका विभिन्न स्थानहरु ? तस्वीरहरु हेर्न भित्र आउनुहोला ।
गौरीशंकरको सेरोफेरोमा पदयात्राको रोमाञ्च
मेचीकाली : 2010-09-30 21:43:16
पदयात्रा पारखीहरूका लागि खुशीको खबर! सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका मनोरम ग्रामीण क्षेत्रलाई समेटिएको गौरीशङ्कर पदमार्ग ७ देखि २० दिनसम्मको पदयात्राका लागि उपयुक्त हुनेगरी तयार गरिएको छ। गौरीशङ्कर हिमाल, च्छो-रोल्पा हिमताल, रोल्वालिङ उपत्यका, थुप्रै गुम्बा, मठमन्दिर र नदीनाला हुँदै अघि बढ्ने यो पदमार्गमा थामी, शेर्पा र तामाङ जातिको जनजीवन तथा संस्कृतिको अवलोकन गर्न सकिन्छ। समुन्द्री सतहदेखि एकहजार मिटरको सिंगटी बजारदेखि ५ हजार ३१० मिटरको यालुङ्ला पाससम्म पुग्ने यो मार्गमा पहाड, उपत्यका, गल्छी, झ्रना, खर्क र जैविक विविधताले यात्रुहरूलाई बेग्लै आनन्द दिन्छन्।
Preparations regarding UML's tea reception programme completes
Government offices resume service
Seventeen killed,7injured in road mishap in Kalikot
Nanda Pd Adhikari passes away
Popular Actor Shree Krishna Shrestha no more
Don Chari killed in shoot-out
Afghanistan win ACC Premier League defeating Nepal by 108 runs
House proceedings stalled for third consecutive day
Indigo Airlines aircraft catches fire, one injured
PM Koirala expands Cabinet
Air Kasthamandap escapes accident in Bajura
Nembang sworn in as CA chair
Former Chief Justice Upadhaya passes away
UML ready to support Koirala
Legislature Parliament commences
Koirala elected NC PP leader
Dr KC breaks his fast
International community extends best wishes to CA
Agitating Docs rendering OPD services from Tundikhel
UCPN (Maoist) CC meet kicks off
कसको कति सिट ?
समानुपातिकको मत परिणाम
प्रत्यक्षतर्फको विजेताहरुको विवरण